I-alumina ekhonkisayo i-alumina ceramic i-thermocouple yokuvikela amashubhu China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic > I-alumina ekhonkisayo i-alumina ceramic i-thermocouple yokuvikela amashubhu
Ikhodi ye-HS: 6914100000
I-Port: Shenzhen Port,HK Port
I-Ceramic e-thermocouple yokuvikela amashubhu
Ngenxa yokusetshenziswa okuhlukene okushisa okuhlukile, ukukhethwa kokuhlanzeka kwe-alumina kufanele kusetshenziselwe ukukhiqiza ithubhu yokuvikela ye-thermocouple, njengama-tubes okuvikela ama-thermocouple angu-95%, ithrekhi ye-ceramic engu-99% ne-99.7% yokuvikela i-ceramic tube. Ngezinye izikhathi, okuqukethwe okungaphezulu kwe-alumina kunama-99.7% okudingekayo ngokusebenzisa ukushisa okuphezulu.
1. Ibanga eliphezulu lempahla: 95%, 99%, 99.5% no 99.7% alumina;
2. Ubuningi obungaphandle: Kungaba yi-300mm, ubude obuphelele bungaba ku-2000mm;
3. Ukubekezelela izilimo eziyizikhubhe zokuvikelwa nge-ceramic: Ukubekezelelana okungcono kakhulu kungaba +/- 0.01mm ngemuva kokugaya;
4. Sisekela ithuluzi lokuvikela elenziwe nge-alumina elitokisini elisekelwe kumdwebo weklayenti kanye namasampuli.
5. Amasampula okuvikela ukukhiqiza okukhulu
● Amandla aphakeme kakhulu ● Ukumelana nokushisa okuphezulu
● Ukumelana okukhulu nomthelela oshisayo ● I-coefficient ye-expansion ephansi yokushisa
● Izakhiwo ezinhle zokushisa nokushisa ● Ukuphikisana ne-acid ne-alkali corrosion
Ama-tubs Protection Protection
I-thermocouple Tuberic Tubes